25 IMIMANGALISO YOMTSHATO YEEARBORS EZIZA KUPHAKAMISA - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho Iingcamango ezingama-25 zoMtshato oMnandi
Iingcamango ezingama-25 zoMtshato oMnandi
Kukho indawo ebekiweyo eya kulungela bonke ubungakanani kunye nesimbo somtshato. Thatha ugqozi kwiintandokazi zethu ukuze ufumane isitayile esifanelekileyo kuwe. Ukuhlaziywa ngo-Epreli 25, 2020
Ukuba ukhetha ukutshata ngaphandle, mhlawumbi ngenxa yokuba uyayithanda indawo obonakala kuyo. Okwangoku, uninzi lwezibini ezitshatileyo zifuna ukubeka ezazo iindlela zazo zesitampu kwindawo yazo yomtshato ukuze zizenzele ngokwazo. Indawo yomtshato yindlela elula yokwenza umtshato wangaphandle kwaye uchaze indawo yomsitho kwindawo evulekileyo. Kodwa sukucinga ukuba inye kuphela indlela yokwenza umtshato womtshato. Ngoku lixesha lokucinga ngaphandle kwebhokisi. Nokuba ujonga izimvo ze-chuppah okanye i-archway ehonjisiweyo yokwenza isakhelo sakho somtshato, zininzi iindlela zokwenza i-arbor yomtshato kwaye uyenze ikhetheke.
Tsala ugqozi kumbala wakho wombala, umxholo okanye ixesha lonyaka-akukho mithetho. Unokudala ubuchule ngeendlela ezahlukeneyo zamalaphu, iintyatyambo kunye noburhabaxa. Qiniseka nje ukuba umtshato wakho womtshato uyahambelana nomsitho, ulwamkelo kunye nokuhonjiswa. Nokuba uhamba nge-whimsical, classic okanye i-homepun ngokupheleleyo, kukho isitayile kunye noyilo olulungele wena.
Ingcebiso yepro: Sebenzisa okukujikelezileyo! Ukubandakanya iintyatyambo kunye nokuhlaza okanye ukhuni kunye nefayibha yindlela yendalo yokudibanisa i-décor yakho kunye nemeko yendalo ngaphandle kokuyongamela. Jonga ezantsi ezinye izimvo zomtshato ukuze zikukhuthaze.
1. Umsitho Wokhuni Lomthi Wendalo
UJustin Wright Photography
Isuka: Umtshato welizwe waseRustic eCactus Creek Barn eDickson, eTennessee
2. Umtshato Arbor usebenzisa iRustic Wood Door ngeLavender Wreath
Chloe Giancola Ifoto
Isuka: Umtshato waseRustic, weVintage kwiiFama zaseLaurel kwiifama eCleveland, eGeorgia
3. I-Arbor Romantic-Shaped Wedding Arbor enezibane zeFairy
URuth Marie Photography
Isuka: Umtshato ongaphandle weShabby-Chic kwindawo yokuhlala yabucala eBrawley, California
4. I-DIY Ribbon Curtain Wedding Arbor
UChris McLaughlin Ukufota
Isuka: Umtshato oMbala, waseRustic kwiFama yaseOsborn eLoveland, eColorado
5. I-Birchwood Wedding Arbor eneRustic Chandelier
UJason + Gina Abafoti boMtshato
Isuka: Umtshato wamaRoma kwiPlanethi yeBluegrass eLyons, eColorado
6. Elula i-Ivory Ilaphu lendwangu yelaphu lomtshato
Eyona Mifanekiso ifanelekileyo
Isuka: Umtshato wendalo, wokuwa kwifama yaseLange eDade City, eFlorida
7. I-Rustic Wood Wedding Arbor kunye nohlaza
UJesse Leake Photography
Isuka: Umtshato weNdalo, weRustic-Chic eDawn Ranch Lodge eGuerneville, California
8. I-Rustic Double-Door Wedding Arbor yokungena
UStephanie Dawn Photography
Isuka: Umtshato wamaRoma, uMtshato waseRustic eCreekwood Gardens eRogers, eArkansas
9. Ukungena kweGazebo kwenziwa kwiArbor Floral Arbor
UBrett Charles Rose Photography
Isuka: Umtshato oDala, oMangalisayo kwiTwin Oaks House nakwiGadi yeNdawo eSan Marcos, California
10. IBhoho Wood Arbor Arbor enamaphupha abambisayo
Ifoto yePaige Winn
Isuka: Umtshato weTafile-ukuya kwiTafile eCreek Club e-O'On kwiNtaba ePleasant, eSouth Carolina
11. Umtshato waselwandle Arbor kunye neBamboo kunye neSheer Draped amalaphu
UKristy kunye neVic Photography
Isuka: Umtshato waselwandle waseRoma eSandbar kwindawo yokutyela eAnna Maria Island, eFlorida
12. IHydrangea- kunye neRose-Covered Wedding Arbor
UJose Villa Photography
Isuka: Umtshato waseMzantsi oPhezulu eCharlottesville, eVirginia
13. Iorenji eKhanyayo kunye noPinki oMdaka oMdaka
Ifoto kaTrish Barker
Isuka: Umtshato waseTropiki wokuFikela eSky Dweller Estate eMaui, eHawaii
14. I-Moss-Draped Birchwood Wedding Arbor egqunywe kwiMidiliya
Isuka: Umtshato weArt Art Deco e-NYIT de Seversky Mansion e-Old Westbury, eNew York
ukungena kwiqhina lomtshato kwiwebhusayithi
15. Umtshato olula oMdaka ngeeKhethini eziMhlophe eziMhlophe kunye neeGarland
UKate Belle Photography
Isuka: Umtshato wangoku, weChic kwiMyuziyam ePhakamileyo yobugcisa eAtlanta, Georgia
16. Ilaphu eliluhlaza elilula lomtshato Arbor Ngee-Orchids ezimfusa
Isuka: Umtshato ongaphandle ophefumlelweyo wezilwanyana eSanta Barbara Zoological Gardens eSanta Barbara, California
17. IWillow Branch Chuppah Wedding Arbor NeeOrchids ezimhlophe
Isuka: Umtshato omhlophe kwiCoral Gables Country Club eCoral Gables, eFlorida
18. Umdwebo weLinen Curtain Wedding Arbor
UBrienne Michelle Photography
Isuka: Umtshato oMnandi, ophefumlelweyo weVintage eSpanish Oaks Ranch eSanta Margarita, eCalifornia
19. Isiqu somthi womthi womthi womthi kunye nendwangu yokuhombisa
Isuka: Umtshato weNtaba weVintage we-DIY kwiNtaba yeSmoky eSevierville, eTennessee
20. Isetyhula Arbor Arbor
21. Imizobo elula yeGrafikhi yeGeometric Arbor Arbor
22. Kufunyenwe i-Object Driftwood kunye neArbor Glass Arbor Arbor
23. I-Crocheted Macrame yomtshato Arbor
24. Upcycled Wedding Arbor NgeVintage yeWindows
25. Iphepha lomtshato Arbor
Bona enye oyithandayo? Nokuba ungumbhangqwana onobuqhetseba kwaye ukhetha ukwenza umtshato wakho womtshato, okanye ufuna nje izimvo zomtshato ukuze ukhuthaze uyilo lwendawo yakho kwaye uzise i-florist yakho, kukho iitoni zeendlela zokwenza into ekumeleyo kwaye yeyakho ngokukodwa. Unokufumana abahlobo kunye nosapho ukuze bancede ukuze umtshato wakho womtshato ubaluleke ngokukodwa.
Nokuba ungathatha luphi uhlobo lomtshato ngaphandle komtshato, wonwabele inkqubo, yenza ubuchule ngezinto zakho kwaye uvumele indawo yakho kunye nembonakalo yangaphandle ikukhuthaze.
Jonga ezona ndawo zintle zomtshato zangaphandle.
izihlangu zendlovu zamantombazana eentyatyambo
ifanitshala yegumbi le-tv